သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု Toy Story မှ 47 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Toy Story ရုပ်ရှင်များကိုတွေ့ရင် (အပိုင်းလေးပိုင်းစလုံး) \_ t သင်တစ် ဦး စီနှင့်တစ်ယောက်ချင်းစီကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ထက်ပိုများသည်။ သူတို့အားလုံးမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကြံစည်မှုတစ်ခုရှိပြီးအိမ်ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးတန်ဖိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်။ သူတို့ဟာကာတွန်းကားတွေဖြစ်ပြီးကလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်ရုံသာမကအရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်အတော်များများလည်းသူတို့ကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအန်ဒီရဲ့ကစားစရာတွေအကြောင်းပြောပြတယ်ကလေးမရှိသောအခါသူတို့သည်အသက်ပြန်ရှင်လာကြသည်။ အန်ဒီရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရုပ်ကတော့ Cowboy တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကလေးကိုသူ့မွေးနေ့အတွက် Buzz Lightyear ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒီသီချင်းတစ်ခုလုံးကိုစပြီးသင်ရှာဖွေရလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့မင်းတို့ဟာမင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံး Toy Story စကားစုတွေကိုပြချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအခုရုပ်ရှင်တွေကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။ ဒီမှာမင်းတို့ပြတော့မယ့်စကားစုတွေကရုပ်ရှင်အားလုံးနဲ့ရော။ သို့သော်ပထမတစ်ခုကိုတွေ့သည်နှင့်သင်ရပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အောက်ပါတို့ကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Pixar Studios ၏ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကာတွန်းကားဖြစ်ပြီး John Lasseter မှရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသိဉာဏ်ရှိသောဘဝ၏နိမိတ်လက္ခဏာရှိပုံရသည်။ - Buzz အလင်းရောင်
Woody: "Buzz၊ မင်းပျံနေတယ်!" Buzz Lightyear: "ဒါကမပျံဘူး၊ ဒါကစတိုင်ကျနေတယ်"
Woody ကိုစိတ်မပူပါနဲ့၊ နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာမကျန်းမမာဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးပြူးနေတဲ့မီးပုံဘေးမှာထိုင်နေလိမ့်မယ်။ - Buzz အလင်းရောင်
သင်အစစ်အမှန် Buzz Lightyear မဟုတ်ပါ! မင်းကအရုပ်ပဲ! မင်းကကလေးရဲ့ကစားစရာပဲ။ - Woody
Woody, ငါနဲ့အတူကစားမယ်ဆိုရင်ကော။ မင်းကိုငါ့ကိုပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်မလား။ - မစ္စတာအာလူး
တစ်ယောက်ယောက်ကငါနဲ့ကစားတော့မယ်။ - Rex
Woody ကငါ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်သူ့အသက်ကိုစွန့်စားခဲ့တယ်။ ငါသူ့အတွက်အဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုသူသူငယ်ချင်းလို့မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ ငါနဲ့ဘယ်သူလဲ - Buzz အလင်းရောင်
ကော်မရှင်နာဝမ်းနည်းပါတယ် - မစ္စတာအာလူး
ငါလတ်ဆတ်တဲ့ကျန်းမာခံစားရတယ် ရပါတယ် - မစ္စတာအာလူး
Woody ကဘာလဲ? ဖန်ခွက်နောက်ကွယ်ရှိကလေးများအားကြည့်ပြီးသင့်ကိုသူတို့နောက်တဖန်သင့်ကိုချစ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်လော။ ဘ ၀ ဆိုတာဘာလဲ ... - Buzz Lightyear
Buzz မီးစက်တစ်လုံးလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး! - Sid
အိုးမဟုတ်၊ ငါတို့မှာဖျားနာနေတယ်။ သူနာပြုသည်အမြန်ခွဲစိတ်ခန်းကိုပြင်ဆင်ပါ။ လူနာက… ပြင်ဆင်ထားသည်။ - Sid
ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ခုခုလူကြမ်းကျဆင်းသွားထင်ပါတယ်။ - ယေရှဲ
ငါကရှာနေတဲ့အသုံးအနှုန်း၊ ငါကမပြောဘူး၊ ကျောင်းမှာကစားစရာကစားစရာတွေရှိတယ်။ - Woody
သုံးနှစ်နှင့်အထက် ... ငါ့သေတ္တာက ... သုံးနှစ်နှင့်အထက် ... ငါနစ်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ - မစ္စတာအာလူး
မင်းငါ့အကြိုက်ဆုံးကူညီသူပါ။ - Woody
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေကိုငါမကြိုက်ဘူး - Rex
သူငယ်တန်းကစားစရာကစားစရာတွေရှိနေလို့ငါရှာနေတဲ့စကားလုံးကငါမသုံးနိုင်ဘူး။ - Woody
ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပြီ။ ငါတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ - ဂြိုလ်သားများ
အန်ဒီကကောလိပ်တက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုတက်ဖို့သင်တကယ်မျှော်လင့်သလား။ Andy ကြီးထွားလာနေပြီးသင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါ။ Woody ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ သငျသညျပြန်လာသို့မဟုတ်ငါတို့နှင့်အတူနေနှင့်အစဉ်အမြဲတည်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုသားသမီးများကမျိုးဆက်သစ်များအတွက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မည် - Foreman
Woody နေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိနိုင်သကဲ့သို့ငါ့အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသတ္တိကောင်းတယ်၊ ကောင်းဘွိုင်တိုင်းလိုပဲ။ ဒါ့အပြင်ကြင်နာခြင်းနှင့်စမတ်။ ဒါပေမဲ့ Woody ကိုထူးခြားစေတာကသူဟာငါ့ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါဘူး။ သူကဒီမှာနေပါစေဘာပဲဖြစ်ဖြစ် - အန်ဒီ
Buzz Lightyear: "ငါတို့ရထားပေါ်တက်လာတာဝမ်းသာတယ်။ " Woody: "အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ရာဇဝတ်ကောင်အနည်းငယ်ကိုဖမ်းရမယ်။ " Buzz Lightyear: "အဆုံးမဲ့နှင့်အဆုံး၌!"
တစ်မိနစ်လောက်စောင့်ပါ။ ဒုံးကျည်များပေါက်ကွဲ! –Woody
ငါကစမတ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြေးအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါသိတယ်။ –Slinky
မင်းဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းပြီးထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ၊ ငါမင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး” —Buzz Lightyear
ငါတို့ကစားစရာတွေအားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ်! - Woody
Buzz Lightyear # 2:“ မင်းအရူးလား။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအသတ်ခံနိုင်အာကာသအုပ်ထိန်းသူ။ ဒါကသစ္စာဖောက်ပြောတာပါ။ Buzz Lightyear: "ငါဒီအချိန်အတွက်အချိန်မရှိဘူး။ "
အိမ်ပြန်ရမယ်။ အန်ဒီသည်မနက်ဖြန်လာမည်။ –Jessie
ဒါ Rex ပါ အသက်ရှင်ခဲ့သမျှအဆိုးရွားဆုံးနှင့်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဒိုင်နိုဆော –Andy
Jessie: "Buzz! ငါတို့မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ " Buzz Lightyear:“ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်တတ်သောအမျိုးသမီး။ မင်းရဲ့emကရာဇ်မင်းရှုံးနိမ့်သွားပြီ
Zကရာဇ် Zurg - Buzz Lightyear ကိုစွန့်လွှတ်ပါ။ ငါနိုင်ခဲ့တယ်။ Buzz Lightyear:“ ငါဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူး။ ငါ့အဘကိုသတ်လေပြီတကား။ Zကရာဇ် Zurg: "Buzz မဟုတ်ပါ၊ ငါမင်းရဲ့ဖေဖေပါ။ " Buzz Lightyear: "Nooooooo!"
Slinky: "ဒီခန်းမကိုငါတို့ဖြတ်ကျော်ပြီးသွားပြီ။ " Mr. Potato Head:“ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီစင်္ကြံကိုငါတို့ဖြတ်သန်းသွားတာမရှိဘူး။ ဒါဟာပန်းရောင်ဖြစ်တယ် " Slinky: ငါတို့ကြည့်ရတာငါတို့ဆုံးရှုံးသွားပြီလေ
Ham: "ဝက်ပေါင်ခြောက်သားညှပ်ပေါင်မုကော? အာလူးနဲ့ခွေးတိုလေးလား?” Rex:“ ငါဘယ်လိုလဲ?” Ham: "မင်းဟာအစားအစာနဲ့အတူကစားစရာဖြစ်နိုင်တယ်။ "
အန်ဒီနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ပြည့်စုံ Woody ဖြစ်ပါတယ်။ –Buzz Lightyear
ဒါဟာ Buzz Lightyear ရဲ့စင်္ကြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်အမြင်အာရုံနိမ့်ကျသည့်ရောင်းချသူများကလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အရုပ်များအလုံအလောက်မမှာယူခဲ့ကြပါ။ -Barbie
ငါ Barbie လမ်းညွှန်ပါ သင်၏လက်များကိုကားအတွင်း၌အစဉ်မပြတ်သိမ်းထားပါ။ Flash ဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် –Barbie လမ်းညွှန်
Buzz -“ မင်းကိုမင်းသိစေချင်တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်တောင်, လက်စားချေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုဟ်ပေါ်တွင်မြှင့်တင်ရန်အရာတစ်ခုခုကိုမဟုတ်ပါဘူး။ " Woody: "ကောင်းပြီ။ ကောင်းပြီ။ " Buzz: "ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာမရှိဘူးလား"
Buzz Lightyear: "ရဲအရာရှိ၊ ဒီအချိန်ဟာထိတ်လန့်စရာအချိန်မဟုတ်ဘူး။ " Woody: "ဒါကထိတ်လန့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ"
မင်းဒီလိုဘယ်သူခေါ်နေတာလဲ ကျွန်ုပ်တွင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၃၀ ကျော်နှင့်လေးစားမှုကိုတောင်းဆိုသည်။ -Mr Potato
ကြည့်စမ်း၊ ဒီအိမ်မှာမင်းကအကောင်းဆုံးလို့ထင်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ မင်းကကြယ်ထိန်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျား၊ မင်းကကစားစရာဖြစ်လို့ပဲ။ - Woody
အဆုံးမဲ့အနန္တသို့! - Buzz အလင်းရောင်
သူ့ ဦး ထုပ်မပါဘဲကောင်းဘွိုင်ဘာလဲ - Buzz အလင်းရောင်
Woody ပြန်ပေးဆွဲခြင်းသည်တရားမဝင်ပါ။ - Rex
Package ခြောက်ခုကို Japan သို့တင်ပို့ခြင်းကမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ လူတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကအမြတ်ထုတ်ကြတယ်။ အိုးဟုတ်ပြီ၊ ပိုကောင်းတော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူး။ ငါလုပ်တော့မယ်၊ - ရန်
Lotso မင်းကိုငါချစ်တယ် ကလေးတစ်ယောက်ကကစားစရာတစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူကသင့်ကိုပေးခဲ့တယ်။ - Woody
Buzz Lightyear ၏ဘလော့ဂ်။ - Buzz အလင်းရောင်
လေဆာရောင်ခြည်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအနည်းငယ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အလင်းပဲ! - Woody
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့် Toy Story စာပိုဒ်တိုများ